တေလာဆွစ်ဖ်ခေတ်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ဟောလိဝုဒ်
တေလာဆွစ်ဖ်ခေတ်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊
အဓိက / ဟောလိဝုဒ်
နာမည်အပြည့်အစုံ တေလာ Alison ဆွစ်ဖ်
နာမည်ပြောင် (များ) Swifty, Aly, Tails, T, Tayter Tot, TayTay, T-Swift, T-Swizzle, Taffy နှင့် Tay
အလုပ်အကိုင် အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးသူ၊ အသံထုတ်လုပ်သူ၊ တေးဂီတဗီဒီယိုဒါရိုက်တာနှင့်သရုပ်ဆောင်တို့ပါ ၀ င်သည်
ပေ & လက်မ၌တည်၏ - ၅ '10 '
အမျိုးအစား Pop, Synth-Pop၊ Country နှင့် Country Pop
အချစ် သီချင်းစာရေးသူ: Lucky You (၂၀၀၁)
အယ်လ်ဘမ် (အဆိုတော်) တေလာဆွစ်ဖ် (၂၀၀၆)
ရုပ်ရှင် (သရုပ်ဆောင်): Jonas Brothers: 3D ဖျော်ဖြေပွဲအတွေ့အကြုံ (၂၀၀၉)
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ MTV ဗီဒီယိုဂီတဆုပေးပွဲ
၂၀၁၃ ခုနှစ် Blank Space အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဗီဒီယို
၂၀၁၅ '1989' အတွက်အကြိုက်ဆုံး Pop / Rock အယ်လ်ဘမ်
၂၀၁၅ Blank Space အတွက်တစ်နှစ်တာ၏သီချင်း
2019: 'မင်းစိတ်အေးအေးထားဖို့လိုအပ်' အတွက်အကြိုက်ဆုံးဂီတဗီဒီယို
၂၀၁၄ ထိပ်တန်း Billboard 200 အဆိုတော်
၂၀၁၄ ထိပ်တန်း Hot 100 အဆိုတော်
ဂီတအတွက် Billboard အမျိုးသမီးများနေ့
၂၀၁၁ ခုနှစ် အမျိုးသမီးတစ် ဦး
၂၀၁၄ အမျိုးသမီးတစ် ဦး
၂၀၁၀ ခုနှစ် 'Fearless' ၏တစ်နှစ်တာ၏အယ်လ်ဘမ်
2016: '1989' အတွက်တစ်နှစ်တာ၏အယ်လ်ဘမ်
၂၀၁၀ ခုနှစ် အမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်၏အမြန်ဆုံးရောင်းချသည့်ဒီဂျစ်တယ်အယ်လ်ဘမ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဂျစ်တယ်သမိုင်းတွင်အလျင်မြန်ဆုံးရောင်းရန်လူပျို
2017: အမျိုးသမီးပေါ့ပ်စတားတစ် ဦး အတွက်အမြင့်ဆုံးနှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေ
မွေးနေ့ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အသက် (၂၀၂၀ အထိ) ၃၁ နှစ်
မွေးရပ်မြေ စာဖတ်ခြင်း, Pennsylvania ပြည်နယ်, အမေရိကန်
ဇာတိမြို့ စာဖတ်ခြင်း, Pennsylvania ပြည်နယ်, အမေရိကန်
ကျောင်း • Alvernia Montessori ကျောင်း၊
• Pennsylvania ပြည်နယ်ရှိ Wyndcroft ကျောင်း
Wyomissing Juniorရိယာအငယ်တန်း / အကြီးတန်းအထက်တန်းကျောင်း၊  NBC Philadelphia တွင်
ဘာသာတရား ခရစ်ယာန်ဘာသာ [နှစ်ခု] Hollow အခန်းငယ်
သွေးအုပ်စု အို +
အစားအစာအလေ့အထ သက်သတ်လွတ်မဟုတ်သူ  Semimd
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ  NPR.org
ဝါသနာ မြင်းစီးခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း
အငြင်းပွားမှုများ •စက်တင်ဘာလ 2009 တွင် Kanye West သည် MTV VMA ၌တေလာ၏လက်ခံမှုမိန့်ခွန်းတွင်ကြားဖြတ်ခဲ့သည်။ Kanye West စင်မြင့်ပေါ်တက်ခုန်ချပြီးပြောလိုက်သည်
Yo, တေလာ၊ မင်းအတွက်ငါတကယ်ပျော်တယ်၊ ငါမင်းကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Beyonce မှာအချိန်တိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အချိန်ကုန်ဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတစ်ခုပဲ! '
နောက်ပိုင်းတွင် Kanye သည်တွစ်တာတွင်တောင်းပန်ခဲ့သည်။
စိတ်မကောင်းပါဘူးတေလာ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်၊ မီဒီယာနဲ့မန်နေဂျာတွေကငါတို့နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သူမသည်မည်သူမဆိုထက် ပို၍ တောင်းပန်ထိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးသည့်အတွက် (Twitter ပူးတွဲတည်ထောင်သူများ) Biz Stone နှင့် Evan Williams ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ '  နာမည်ကြီး
• ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်တေလာသည်သူမ၏ပထမဆုံးဂီတတံဆိပ်ဖြစ်သော Big Machine Label Group ကိုသူမ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ခြောက်ခု၏ဂီတမန်နေဂျာ Scooter Braun ၏ Ithaca Holdings LLC သို့ရောင်းချခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။  ရေနံချောင်း
ရေးရာ / ရည်းစား • Brandon Borello (၂၀၀၅)
• Sam Armstrong (၂၀၀၆)
ဂျိုးဂျိုနပ်စ်၊ အမေရိကန်အဆိုတော် (၂၀၀၈)
Lucas Till၊ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင် (၂၀၀၉)
ဂျွန်မေယာ၊ အမေရိကန်အဆိုတော်တေးရေးဆရာ (၂၀၀၉)
•တေလာ Launter၊ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင် (၂၀၀၉)
• Toby Hemingway, မင်းသား (၂၀၁၀)
• Jake Gyllenhaal၊ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင် (၂၀၁၀)
• Harry Styles, အဆိုတော် - တေးရေးဆရာ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)
• Conor ကနေဒီ၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူ (၂၀၁၂)
• Calvin Harris, စကော့တလန် DJ (2015-2016)
• Tom Hiddleston၊ သရုပ်ဆောင် (၂၀၁၆ မေလမှ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ)
• Joe Alwyn၊ သရုပ်ဆောင် (၂၀၁၇ - လက်ရှိ)
မိဘများ ဖခင် - Scott Kingsley ဆွစ်ဖ် (Merrill Lynch အတွက် Stockbroker)
အမေ - Andrea Gardner ဆွစ် (Mutual Fund Marketing Executive) ။
မောင်နှမများ အစ်ကို - Austin ဆွစ်ဖ် (သရုပ်ဆောင်)
အစားအစာ ခရမ်းချဉ်သီး, ကြက်တင်ဒါများနှင့်ကွတ်ကီးများပါသောကြက်
မင်းသမီး ဖိဗေ Waller- တံတား
ရုပ်ရှင် Love Actually (၂၀၀၃)
အဆိုတော် (များ) Justin Timberlake , Ed Sheeran Tim McGraw၊ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ Nicki Minaj , Britney Spears နှင့် Dixie ကြက်
တီဗီရှိုး သူငယ်ချင်းများ (၁၉၉၄)
•စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း - အထူးသားကောင်များအဖွဲ့ (၁၉၉၉)
Grey's ခန္ဓာဗေဒ (၂၀၀၅)
ခရီးလမ်းဆုံး (များ) Kansas, သြစတြေးလျ, မိန်း, မက်ဆာချူးဆက်နှင့်လန်ဒန်
ကားစုဆောင်းခြင်း • Porsche 911
• Audi R8 - အားကစား
ပိုင်ဆိုင်မှုများ / Properties ကို အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၈၄ သန်းဖြစ်သည်  Business Insider
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 2019 ခုနှစ်တွင် $ 185 သန်း  Forbes မဂ္ဂဇင်း
တေလာဆွစ်ဖ်နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Taylor Swift သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား? ဟုတ်တယ်
သူမ၏မိဘများသည် Presbyterian Churchgoers ဖြစ်သဖြင့်တေလာသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကကျမ်းစာသင်တန်းများတက်ခဲ့သည်။
သူမ၏မိခင်အဘွားသည်အော်ပရာအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Puerto Rico ရှိတီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခု၏အိမ်ရှင်ဖြစ်သည်။
အသက် ၉ နှစ်အရွယ်တွင်ဂီတပြဇာတ်ရုံကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး Berks Youth Theatre Academy Productions တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သူသည် Pennsylvania မှသူမ၏သရုပ်ဆောင်သင်တန်းများအတွက်နယူးယောက်သို့ပုံမှန်သွားလေ့ရှိသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည် Shania Twain ၏သီချင်းများဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရပြီးတိုင်းပြည်၏ဂီတကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Faith Hill အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်သူမသည်ဂီတလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်နယူးယောက်၊ Nashville သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင် Dolly Parton၊ Dixie Chicks နှင့် LeAnn Rimes တို့၏သီချင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်သောကာရာအိုကေစီဒီကို Nashville စံချိန်တွင်တင်ခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူမကဤအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။
ဒါဟာနွေ ဦး ရာသီမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော် ၁၁ နှစ်ပါ။ ဒီလီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော့်မှာ Dolly Parton, Dixie Chicks and LeAnn Rimes တို့ရဲ့သီချင်းတွေဆိုသည့်ကာရာအိုကီ CD လေးတစ်ခုရှိတယ်။ ထိုအခါငါဒီသရုပ်ပြ CD များနှင့်အတူ Music Row ကိုတက်နှင့်တက်ချီတက်, ငါ့အမေနှင့်ငါ့ညီငယ်တစ် ဦး အငှားကားတစ်စီး၌အပြင်ဘက်ရပ်ထားစဉ်ငါအထဲသို့ဝင်။ သူတို့ကို the ည့်ခံဖို့လက်ပေးချင်ပါတယ်။ '
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်ကွန်ပျူတာပြုပြင်သူနှင့်ဒေသခံဂီတပညာရှင် Ronnie Cremer လက်အောက်တွင်ဂစ်တာတီးခြင်းသင်တန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏အကူအညီဖြင့်တေလာသည်သူမ၏ Lucky You သီချင်းကိုပထမဆုံးရေးသားခဲ့သည်။
2003 ခုနှစ်တွင် Dan Dymtrow ၏အကူအညီဖြင့်တေလာသည်သူတို့၏“ Rising Stars” လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် 'Abercrombie & Fitch' အတွက်စံပြအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
သူမသည်သူမ၏မူလသီချင်းများကို RCA Records တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တေလာသည် Aron အကယ်ဒမီတွင်စာရင်းသွင်းခံရပြီးနေအိမ်တွင်ကျောင်းပညာရေးဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်။
သူသည်နောက်ပိုင်းတွင် Troy Verges၊ Brett Beavers၊ Brett James, Mac McAnally, Warren Brothers နှင့် Liz Rose စသည့်အတွေ့အကြုံရှိသည့်တေးရေးဆရာများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Liz Rose ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ
အဆိုပါအစည်းအဝေးများငါအစဉ်အမြဲငါပြုပါအလွယ်ကူဆုံးအချို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့သူကသူမရဲ့အယ်ဒီတာပဲ။ သူမသည်ထိုနေ့ကျောင်း၌ဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုရေးသားချင်ပါတယ်။ သူမသည်သူမပြောဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရာ၏ထိုကဲ့သို့သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိန်းမသည်အရှိဆုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချိတ်နှင့်အတူလာချင်ပါတယ်။ '
တေလာသည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် RCA မှတ်တမ်းမှထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူမသည် Sony / ATV ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီမှလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်သူသည် Nashville's Bluebird Caféတွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီး DreamWorks မှတ်တမ်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Borchetta ၏အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Borchetta သည် Big Machine Records အမည်ဖြင့်လွတ်လပ်သောစံချိန်တင်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်စီစဉ်နေသည်။ တေလာ၏ဖခင် Borchetta ရဲ့ကုမ္ပဏီသုံးရာခိုင်နှုန်းရှယ်ယာဝယ်ယူခဲ့သည်။
တေလာသည်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသူမ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ် 'တေလာဆွစ်ဖ်' ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၄ တွင်ဂီတတံဆိပ် Big Machine Records အောက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ၇.၇၅ သန်းကျော်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည် 'Love Story,' 'Tim McGraw', 'Our Song' နှင့် 'My Guitar on Teardrops' အပါအ ၀ င်အခြား chartbuster သီချင်းများစွာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူမသည် Cover Girl, Sony Electronics နှင့် Diet Coke တို့အပါအ ၀ င် Ace တံဆိပ်များစွာ၏အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်အဖြစ်ငှားရမ်းခံခဲ့ရသည်။
သူမတွင် Red (2012)၊ 1989 (2014), Reputation (2017) နှင့် Lover (2019) စသည့်သူမ၏ကျော်ကြားသောအယ်လ်ဘမ်များစွာရှိသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာသူမ၏သီချင်းအချို့သည်သူမ၏ရည်းစားဟောင်းဟောင်းများအတွက်ရည်စူးထားခြင်းဖြစ်သည်၊ အချို့သောသီချင်းများမှာ“ ငါတို့ဘယ်တော့မှအတူတူပြန်လာမှာမဟုတ်၊ ”“ Style”,“ Mine” နှင့်“ Back to December” ဖြစ်သည်။
သူသည် Fearless Tour (၂၀၀၉-၂၀၁၀)၊ Speak Now World Tour (၂၀၁၁-၂၀၁၂)၊ Red Tour (၂၀၁၃-၂၀၁၄)၊ The 1989 World Tour (2015), Reputation Stadium Tour (၂၀၁၈) ကဲ့သို့သောဂီတခရီးစဉ်များတွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ နှင့် Lover ပွဲတော်တွင် (2020) ။
သီဆိုခြင်းအပြင်သူမသည်လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်သူမသည်ကလေးသူငယ်များကိုအွန်လိုင်းသားကောင်များထံမှကာကွယ်ရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည် PETA၊ ကြက်ခြေနီ၊ ယူနီဆက်နှင့်ကင်ဆာသုတေသနဌာနစသည့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့များတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Taylor Swift ဟာသူမရဲ့ရေမွှေးလိုင်း၏ Launch Event မှာ
David Letterman နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်တေလာကသူသွားသောတိုင်းနိုင်ငံ၏ဘာသာစကားနှင့်ပါသောစာပိုဒ်တိုအချို့ကိုသင်ကြားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်သူသည် Nashville ရှိ 'Country Music of Fame and Museum' တွင်ဒေါ်လာ ၄ မီလီယံပညာရေးစင်တာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Taylor Swift ပညာရေးစင်တာ
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်သူသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကျင်းပသောအဆိုတော်ဆုအပါအဝင်အမေရိကန်ဂီတဆု (၆) ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်စုစုပေါင်း AMAs ၂၉ ခု၊ ဒဏ္legာရီအဆိုတော်၏စံချိန်ရိုက်နှက် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ။
တေလာ၏အသွင်အပြင်တူမိန်းကလေး Kansas ပြည်နယ်ကနေAprilပြီ Glorias ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တေလာနှင့်အလွန်ဆင်တူသဖြင့်သူမတူတူအမြွှာနှင့်တူသည်။
တေလာဆွစ် (ဘယ်ဘက်) နှင့်Glပြီလဂလိုရီယာ (ညာဘက်)
ileana cru cruz ၏အသက်
တေလာကိုနောက်အဆိုတော်တ ဦး ဖြစ်သောဂျိမ်းစ်တေလာ၏အမည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။
တေလာဆွစ်ဖ်သည်ဂစ်တာများ (အသံ၊ လျှပ်စစ်၊ ဘန်ဂျို)၊ စန္ဒရားနှင့်အူကူလီလာကဲ့သို့သောတူရိယာအမျိုးမျိုးကိုကစားတတ်သည်။
ဆွစ်ဖ်သည် Sony / ATV ဂီတထုတ်ဝေရေးအိမ်၌လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောအငယ်ဆုံးသောသီချင်းရေးသူဖြစ်သည်။
တေလာသည်သူမ၏အမည်အောက်တွင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ရှိသည်။
တေလာသည်သူမ၏ပရိတ်သတ်များထံလက်ဆောင်များပေးပို့ပြီး Swiftmas ဟုခေါ်သည်။
ဆွစ်ဖ်သည်တစ်နေ့တာအတွင်းသူမအားမျှတသောလျော်ကြေးငွေပေးဆောင်ရန်အတွက် iPhone နှင့် MacBook ကုမ္ပဏီကြီး Apple ကိုတစ် ဦး တည်းလက်လွှတ်လိုက်ရသည်။
သူမသည်ကြောင်ကိုနှစ်သက်သည်။ သူမ၏အိမ်မွေးကြောင်နှစ်ကောင်မှာ Meredith နှင့် Olivia ဖြစ်သည်။
သူမသည် '13' ကိုသူမ၏ကံကောင်းသောနံပါတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
သူမသည် Vogue, Time, Billboard နှင့် Elle ကဲ့သို့သောလူသိများသောမဂ္ဂဇင်းအမျိုးမျိုး / မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာတွင်ပါရှိသည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင်သူသည်သူမ၏လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အတွက်အားကစားရုံတစ်ခုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခဲ့သည် ဂျက်စတင်ဘီဘာ တေလာရှိရာသို့ရောက်သောအခါအားကစားခန်းမတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။
↑၁ NBC Philadelphia တွင်
↑နှစ် Hollow အခန်းငယ်
↑၈ Forbes မဂ္ဂဇင်း
salman khan မိသားစုပုံများ ၂၀၀၉
Baal veer သွန်းနှင့်အမှုထမ်း
Amir Khan ကဇနီး kiran rao